လေဖြတ်ခြင်းကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး,မိသားစုနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေမှာ ဘယ်လိုဖိအားတွေ သက်ရောက်စေလဲ - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » လေဖြတ်ရောဂါ » လေဖြတ်ခြင်းကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး,မိသားစုနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေမှာ ဘယ်လိုဖိအားတွေ သက်ရောက်စေလဲ
လေဖြတ်ခြင်းကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး,မိသားစုနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေမှာ ဘယ်လိုဖိအားတွေ သက်ရောက်စေလဲ
လေဖြတ်ခြင်းဟာ ကာယကံရှင်ကိုသာမက အိမ်ထောင်ဖက်၊မိသားစုနဲ့ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကြား ဆက်ဆံရေးတွေကိုပါ ထိခိုက်လာစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် လေဖြတ်ပြီးနာလန်ထချိန်ဟာ အင်မတန်မှ ခက်ခဲပင်ပန်းလှပါတယ်။သူတို့တတွေ တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရမယ့် အခက်အခဲ၊ပြဿနာတွေကို သင့်အနေနဲ့ သိရှိစေနိုင်ဖို့ ဒီဆောင်းပါးလေးကနေ မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။
လေဖြတ်ခြင်းဟာ သင့်ကိုရော၊သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုပါ ထိခိုက်စေပါတယ်။နာကျင်ခြင်း၊ကြွက်သားတောင့်တင်းခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ကြွက်သားများ မလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်း အစရှိတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုတွေကို သင်ခံစားရပါမယ်။အဝတ်အစားလဲတာ၊စားတာသောက်တာ၊အညစ်အကြေးစွန့်တာ အစရှိတဲ့ နိစ္စဓူဝပြုဖွယ်တွေကို သင့်အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ပေါ် မှီခိုရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုကျဆင်းလာပါတော့တယ်။သင့်စိတ်ခံစားမှုတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ အချို့သော အစိတ်အပိုင်းတွေကိုလည်း လေဖြတ်ခြင်းဝေဒနာက ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်မှာပါ။ဒီလိုဆိုရင် သင်နဲ့ သင့်အိမ်ထောင်ဖက်တို့အကြား ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်ဆံမှုကိုလည်း အထိုက်အလျောက် ထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်။
လေဖြတ်ဝေဒနာခံစားရပြီးနောက်မှာ သင့်ရဲ့အနေအထားကလည်း ပြောင်းလဲသွားပါပြီ။သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ဟာ မိသားစုကို အဓိကရှာဖွေကျွေးမွေးထောက်ပံ့ရသူ ဖြစ်သွားသလို သင့်ကို အဓိက ပြုစုစောင့်ရှောက်ရသူလည်း ဖြစ်သွားပါပြီ။ဒီလိုအနေအထားမျိုးကို အသားကျဖို့အတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံး အချိန်ယူရပါမယ်။
သင့်စိတ်ခံစားချက်တွေကို မထိန်းချုပ်နိုင်တော့တဲ့အတွက် သင်ဟာ စိတ်တိုစိတ်ဆတ်တတ်လာပါမယ်။တခါတရံ ပြဿနာတွေကို သင့်အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ အခက်အခဲတွေ ရှိလာပါမယ်။ဒါ့အပြင် သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ဟာ သင့်ကို ဂရုမစိုက်ဘူး။ပစ်ပစ်ခါခါ လုပ်ထားတယ်လို့ ခံစားနေမိတာ ဒါမှမဟုတ် သင့်ကို ပစ်သွားသင့်ပြီလို့ တွေးမိတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊နာကျင်ခြင်း၊စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ကြွက်သားအားနည်းခြင်း၊ကြွက်သားတောင့်တင်းခြင်းတွေကြောင့် သင့်မှာ ဟိုစိတ်သည်စိတ်တွေလည်း အများကြီး လျော့နည်းသွားပါပြီ။
လေဖြတ်ဝေဒနာရဲ့ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေဟာ မိသားစုအပေါ်ရော ဘယ်လိုသက်ရောက်သလဲ။
သင်ဘယ်လိုဝေဒနာတွေ ခံစားနေရသလဲ ဒါမှမဟုတ် ဘာစိတ်ခံစားချက်တွေရှိနေသလဲဆိုတာကို သင့်မိသားစုက နားလည်ချင်မှ နားလည်ပါလိမ့်မယ်။သင့်မိသားစုတွင်း အနေအထားတွေကလည်း ပြောင်းလဲကုန်ပါပြီ။သင့်မိသားစုဝင်တွေဟာ အခါတိုင်းထက်ပိုပြီး အလုပ်လုပ်ရပါပြီ : ချက်ပြုတ်တာ၊ငွေရှာရတာ၊ကလေးတွေကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရတာ၊သင့်ရဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို ရှင်းလင်းပေးရတာ စသဖြင့်ပေါ့။လေမဖြတ်ခင်က သင်လုပ်နေကျ ပြုဖွယ်ကိစ္စတွေကို မလုပ်ဆောင်နိုင်တော့တဲ့အတွက် သင်ဟာ လူပိုကြီးတယောက်ဖြစ်နေပြီ၊မိသားစုအတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီး ဖြစ်နေပြီလို့ ခံစားမိလာပါလိမ့်မယ်။ကလေးတွေရဲ့ အနေအထားကလည်း ပြောင်းလဲလာရပါပြီ။အဖေ သို့မဟုတ် အမေဟာ နေမကောင်းတဲ့အတွက် သူတို့လေးတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို အရင်ကလို ဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်တော့ပါဘူး။ဂရုမစိုက်နိုင်တော့ပါဘူး။သူတို့လေးတွေရဲ့ ကျောင်းတွင်း/ကျောင်းပြင် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေမှာ သင်မပါဝင်နိုင်တော့တဲ့အတွက် အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အိမ်တွင်းရေးအခက်အခဲတွေဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကြောင့် ဖြစ်မယ်လို့ ကလေးတွေက တွေးထင်လာပါလိမ့်မယ်။
အိမ်ထောင်ကျပြီးသား သားသမီးတွေကျပြန်တော့လည်း သူတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ သားသမီးတွေကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အတွက် သင့်ကို အချိန်ပေးနိုင်ဖို့ မလွယ်ကူလှပါဘူး။
လေဖြတ်ဝေဒနာ ခံစားရပြီးနောက်မှာ သင်နဲ့ သင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေအကြား ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကလည်း ပြောင်းလဲလို့ သွားခဲ့ပါပြီ။မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေဟာ သင်နဲ့အတူတူရှိမနေချင်တော့ပါဘူး။စိတ်ကသိကအောင့်ဖြစ်စရာ၊ရှက်စရာလို ထင်လာပါလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတဲ့ အနေအထားတခုမှာ သင်နဲ့ ဝေးဝေးနေပါလိမ့်မယ်။ဘက်စကတ်ဘောကစားတာ၊အတူလည်ပတ်တာ၊ဆိုင်ထိုင်တာ ဒါမှမဟုတ် ဂေါက်ရိုက်တာ အစရှိတဲ့ သင်နဲ့ သင့်မိတ်ဆွေတွေ အတူတကွ ဆောင်ရွက်နေကြကိစ္စတွေကို သင်မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒီလိုမျိုး အတူတကွ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေ မရှိတော့တာ၊ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့ တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ရတာ၊ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဖိအားတွေ၊လူမှုကွန်ယက်တွေရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတာ ဒါမှမဟုတ် အားအင်ကုန်ခမ်းပြီး မလုပ်နိုင်မကိုင်နိုင်ဖြစ်နေတာတွေကြောင့် အချို့သော လေဖြတ်ရောဂါသည်တွေဟာ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကို ဆုံးရှုံးရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် သင့်အနေနဲ့ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများအကြား ဆက်ဆံရေးကို အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းသိမ်းထားသင့်ပါတယ်။မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ မိသားစုရဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုဟာ အထိုင်အလျောက်ကွာခြားမှုတွေ ရှိနေသည့်တိုင် သင့်ရဲ့နာလန်ထကာလမှာ ဒီနှစ်မျိုးလုံးကို လိုအပ်တာ သေချာပါတယ်။
အချုပ်ဆိုရရင် လေဖြတ်ဝေဒနာဟာ လင်မယားနှစ်ဦးကြား၊မိသားစုဝင်များအကြား ဒါမှမဟုတ် မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများအကြားမှာ ပြဿနာတွေ၊စိတ်ဖိစီးမှုအခက်အခဲများစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။လေဖြတ်ခြင်းကြောင့် တွေ့ကြုံခံစားလာရမယ့် ဖြစ်နိုင်ချေပြဿနာတွေ၊အခက်အခဲတွေကို သိရှိထားခြင်းအားဖြင့် လေဖြတ်ဝေဒနာရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေအကြောင်း ပိုမိုနားလည်ကာ လေမဖြတ်အောင်ကာကွယ်ခြင်းရဲ့ အရေးပါမှုကို သင့်အနေနဲ့ ပိုမိုသဘောပေါက်လာမှာဖြစ်တဲ့အပြင် သင့်အနီးအနားက လူတဦးဦး လေဖြတ်ပြီဆိုရင်လည်း ဘာတွေလုပ်ဆောင်သင့်သလဲဆိုတာကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ပါမယ်။
လေဖြတ်ပြီးနောက် ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
မွေးကင်းစနှင့် ကလေးငယ်လေးတွေမှာ လေဖြတ်ခြင်းကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိနိုင်မလဲ
ကလေးလေဖြတ်ခြင်းနှင့် လူကြီးလေဖြတ်ခြင်း ဘာကွာသလဲ
ဆရာဝန်က လေဖြတ်ရောဂါကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိသလဲ
လေဖြတ်ခြင်း၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိရောက်မှု
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုငျ 9, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇူလိုငျ 9, 2018
Feeling overwhelmed – The emotional impact of stroke. https://www.stroke.org.uk/sites/default/files/feeling_overwhelmed_final_web_0.pdf. Accessed May 19, 2017.
Relationships and sex after stroke.
https://www.chss.org.uk/documents/2014/05/sex-after-stroke-illness-pdf.pdf. Accessed May 19, 2017.
RELATIONSHIPS; FAMILIES AS VICTIMS OF STROKE.
http://www.nytimes.com/1983/05/09/style/relationships-families-as-victims-of-stroke.html. Accessed May 19, 2017.
သွေးကြောနံရံပုံမမှန်ခြင်း နှင့် လေဖြတ်ခြင်း
ဦးနှောက်သွေးကြော ပုံပျက်ခြင်းဟာ ခေါင်းကိုက်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါ
လေဖြတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာ သော နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါစု
ကိုယ်ဝန်ဆောင် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများသည် လေဖြတ်နိုင်ခြေကို မြင့်တက်စေသည်
သွေးဖိအားကို ဘယ်လို စနစ်တကျ တိုင်းတာမလဲ
ကလေးငယ်များ၊ လူငယ်များ လေဖြတ်ပြီးနောက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ခြင်း
နှလုံးနှုန်းခုန်စောင့်ကြည့်စက်ဖြင့် လေဖြတ်ခြင်းကို စောင့်ကြည့်ခြင်း